न्यूज सञ्जाल: » पूर्वका तीन दुर्घटनामा परेर तीन जनाको ज्यान गयो
पूर्वका तीन दुर्घटनामा परेर तीन जनाको ज्यान गयो
न्यूज सञ्जाल ९ पुष २०७७, बिहीबार १६:१५
मोरङ । प्रदेश नम्बर १ का सुनसरी, झापा र ओखलढुङ्गामा भएको गाडी दुर्घटनामा परेर तीन जनाको ज्यान गएको छ ।
बुधबार साँझमा सुनसरीको देवानगंज २ रामटोलमा को. २ ह ४९२१ नम्बरको अटो ट्याम्पोले ठक्कर दिँदा घाइते भएका स्थानीय ९० वर्षीय बेचुदास मेहेतालाई उपचारको लागि नोबेल अस्पताल विराटनगर लैजाने क्रममा बाटोमा नै ज्यान गएको छ ।
ठक्कर दिने अटो र चालकलाई इलाका प्रहरी कार्यालय देवानगंजले नियन्त्रणमा लिएको छ । यसैगरी झापाको बिर्तामोड नगरपालिका ५ पूर्वपश्चिम राजमार्गमा बा. २१ च ५९३६ नम्बरको कारले पैदल यात्रीलाई ठक्कर दिँदा स्थानीय २८ वर्षीय राजेन्द्र चौधरीको ज्यान गएको छ । बुधबार कारले ठक्कर दिँदा घाइते भएका चौधरीको झापाको बिएण्डसी अस्पतालमा उपचारको क्रममा ज्यान गएको हो ।
यस्तै ओखलढुङ्गाको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका ६ सोक्माटारमा बा. ३३ प ३०८७ नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भएर दुर्घटना हुँदा मोटरसाइकल चालकको ज्यान गएको छ।
बुधबार राति मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै काठमाण्डौबाट खोटाङतर्फ जाँदै गरेको मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा घाइते भएका रामेछापको मन्थली गाउँपालिका ९ का २८ वर्षीय टेकबहादुर नेपालीलाई उपचारको लागि जनसेवा हेल्थ केयर घुर्मी लगिएकोमा उपचारको क्रममा राति नै ज्यान गएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ।